AQRISO:Warqad sir ah oo uu wariye cabdi maalik coldoon hooyadiis u qoray intii uu xabsiga ku jiray#aqri wax badan oo qarsoon | Xaqiiqonews
AQRISO:Warqad sir ah oo uu wariye cabdi maalik coldoon hooyadiis u qoray intii uu xabsiga ku jiray#aqri wax badan oo qarsoon
Warqaddani sirta ah oo soo gaartay shabakadda baahisa wararka qarsoon ee xaqiiqonews ayaa waxaa qoray wariye cabdi maalik coldoon intii uu ku jiray xabsigga waxaana warqaddu ay ku socotaa hooyadiis isagoo ka hadlaayey xaaladda uu dareemaayey markii uu xabsiga galay .
Warqad uu Cabdi Maalik Coldoon Xabsiga uga Soo dhex Qoray Hooyadiii–
Hooyo macaan, salaan kadib;
Warqaddan waxaan ka soo qorayaa gudaha xabsiga, gaar ahaan qolka yar ee aan muddada ku xirdhnaa dhexdiisa. Markii la i soo xidhay, waxa la iga reebay Mobile-kii iyo saacaddiiba, sidaas daraaddeed ma ogaan karo ayaanka ay maanta ku aaddan tahay. Mid ay ahaataba kolley Jimce ma aha, waayo eedaankii jimcaha iyo khudbadii xigtay toona ma maqlin maanta.
Jimcahaas baan ku keenay ee intii la i soo xiray, waxa xabsiga igu dhaafay 6 jimce. Ilaahay un baa loo sheegtaa xiisaha aan u qabo in aan ku tukado gudaha masjidkii carfoonaa ee xaafadda yada.
Hooyo, tan iyo markii la i soo xidhay waxaa xabsiga iigu idlaatay bil iyo toban cisho. Run ahaantii, hooyo macaan sida aad la socoto tani ma aha markii u gu horeysay ee la i xidho. Hayeeshee xadhigeyga markan si gaar ah ayuu ii xanuujinaayaa. Waayo, intii aan xirnaa waxa i soo gaaray dhiillooyin fara badan. Ha noqoto abaaro, biyo la’aan, xanuun, macaluul, daadad, tahriib iyo inamo reeraha ah oo ay diyaarado cadaw ahi xagaa iyo Yemen ku duqeeyeen.
Laba sanno ka hor hees aan tiriyay, waxaan is weydiinayay, “Yaa ila dareemaaya, dayacaadda sii baahday, doc kastaba ka soo fool leh, sida daadka ina qaaday?” Waxay u egtahay in illaa iyo hadda cid ila dareenta la la’ yahay. Balse waxa jirta cid diiddan aniga iyo inta ila mid ka ahi aan umadda tusino, una iftiimino dhibaatooyinkaas.
Hooyo, run ahaantii murugada ugu weyn ee xabsi igu haysaa ma aha mid aan naftayda ka murugoonayo ee waa mid aan waddankayga u murgoonayo. Waa mid aan u murgoonayo marwadayda Aasiya; geenyadaa xaaskayga ah, ee lixdii bilood ee la soo dhaafay xilahayga ahayd, oo waliba duruufo shaqo awgeed in badan oo lixdaasi bilood ka mid ahi aan safaro ka ga maqnaa, maantana la iga xidhay oo cidlo iyo welwel ku jirta.
Hooyo macaan, marnaba isma odhan waddankaaga ayaa dulmi qayaxan lagu gu xiri doonaa. Isma odhan maxaad u hadashay ayaa lagu gu xidhi. Isma odhan maxaad xeebtii Xamar u tagtay ayaa lagu gu xidhi. Hooyo, waxaad iga gaadshiisaa qolooyinkii isoo xidhay in aan qiranaayo in tiradu iga gedmatay. Waxaad u sheegtaa in aan qiranaayo i aan gefay, u sheeg in aan yara fududaaday. Waxaad u raacisaa in sababaha gafkaygu aanay la xidhiidhin safarkii aan Xamar ku tagay.
Gefkeygu wuxuu yahay in aan aaminay xorriyadda qofeed iyo madaxbanaannida hadalka. Gefkeygu wuxuu yahay in aan aaminay oo aan isku halleeyay dhallintii waddankayga, boqorradeennii, cuqaasheennii, salaadiinteennii, culimadeennii diinta calanka u sidday iyo hay’adihii xuquuqda aadanaha nagu waalay, oo aan is lahaa way kuu gurman doonaan.
Hooyo macaan, waxaan ka xumaahay in waddankii aad jacaylkiisa igu beertay, in uu san isagu i jeclaanin. Haa, hooyo sidii aan ugu lisay iigu muu hanbeyn !
Gebagebada warqaddaydan, hooyo waxa aad ogaataa in aa maalin uun soo bixi doono. Dulmigu ma waaro, hase ahaatee abaal marintiisu way raagtaaa qiyaamaha. Ciddii i dulmisay ilaah ayay leedahay caadil ah, anigu na iIlaah baan leeyahay naxariis badan. Maalmuhu na waa giraan, gelinba cayn ah!
Cabdi Maalik Sheikh Muuse “Coldoon”.